Vista's Colorful Planet: ရှဉ့်ငပေါလေး
ကျနော်ကသူ့ တွေ့ တော့
“ ဟယ်ဟိုမှာရှဉ့်ငပေါလေး”လို့ အပြော
( ဘာလို့ အဲလိုခေါ်ကြလည်းကျနော်လည်းမသိဘူး ..ဟိ )
November 28, 2009 at 3:49 PM
November 29, 2009 at 6:58 AM
ရုံလေးလည်း သိချင်နေတာ အဲ့လို
ခေါ်တာကိုလေ လန်ဒန်က သူငယ်ချင်းလေးတယောက်ကို
ရှဉ့်ငပေါလေ ပုံရိုက် ပြီးပေးလိုက်တာ သူကမေးတယ်
ဘာလေးလည်းတဲ့ ရှဉ့်ငပေါ လို့ ပြေားတော့
ရီတယ်တော့ သိလား ဘာလို့ အဲ့လိုခေါ်တာလည်းတဲ့
ခုတော့အဖော်ရပြီ Vista လေးလည်းတိဝူးပေါ့နော်
November 29, 2009 at 6:29 PM
ဒီကကောင်တွေနဲ့ မတူဘူး.. သူက ပိုပိန်တယ်
တို့ ရောက်ကာစက သူတို့ကို မြင်ရင် ထူးဆန်းနေတာ၊ ခြံထဲမှာတင် လေးငါးကောင်ရှိတယ်
တခါတလေ သိပ်သောင်းကျန်းတာပဲ၊ မျက်စိကိုနောက်ရော
Third shot is the best
November 30, 2009 at 10:44 AM
ရုံလေး ဟုတ်တယ်တို့ လည်းမသိဘူး
မေ ကိုယ်ကတော့သိပ်ချစ်တယ် အဲကောင်လေးတွေကို
November 30, 2009 at 11:08 AM
ငပေါ ဆိုတာပါရင် ချစ်ပြီးသားပဲ.. ဘဝတူတွေ.. (တကယ်လည်း ပေါဘဲနဲ့ ငပေါ ငပေါလို့ ပြောခံရတဲ့ဘဝ)
BuildingaPi Kubernetes Cluster – Part3– Worker Nodes and MetalLB
The Real one....
Arrived !! Arrived !!
တို့ဟူး နှစ်ပြန်ကြော် - ဒီနေ့တော့ ကျောင်းအဆောင်က ပြန်လာတဲ့ သမီးငယ်လေးအတွက် သူစားချင်တဲ့ တို့ဟူးလေး ကြော်ဖြစ်ပါတယ် တို့ဟူးကြော်နေရင်းက တစ်အိုးကျက်လို့ ဆယ်ပေးလိုက်နဲ့ နောက်ဆုံးတော...
Sweet December ! ❤❤ - I wish you all to be sweet in Sweet December. But for me December is not so sweet. Father, sister ... they run away from us. But I tried... I am trying... I...
ဘဝမှတ်စု ၅ - မြင်မှု သိမှုဟာ ယုံကြည်မှုကို ဖြစ်စေတယ်လို့ ဆိုကြတယ်။ မြင်မှုတိုင်းမှာ ယုံကြည်မှုထည့်သင့်ရဲ့လား...။ အာရုံသိတွေက လောကရဲ့မမှန်မကန်ရုပ်ပုံလွှာတွေ၊ ဆင်...
ရင်ဘတ်ထဲကလူ -( ၁၁) - အလွမ်းတွေက မိုးလိုအုံ့တော့ ပြိုဖို့အတွက် စောင့်ရတဲ့အချိန်တွေက ကြာလွန်းတယ်.. အချစ်ရှိရာဆီ သွားဖို့ ပုံမှန်နှုန်း ကီလို၆၀ဆိုပေမယ့် နင်းမိတဲ့ လီဗာအရှိန်...